Roobab lagu diirsaday oo ka ‘aday Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Roobab lagu diirsaday oo ka ‘aday Muqdisho
Tuuryare 8 May 2019
Waxaa xalay Magalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah degmooyinka dalka ka da’ay Roobkii Guga,kaas oo in badan dadka Soomaaliyeed ay wada sugayeen maadaama maalmahaan uu jiray kuleyl daran.
Xalay fiidkii ayaa Roobka Guga waxa uu ka bilaawday Magalada Muqdisho,waxaana roobkaas uu biyo farabadan dhigay Wadooyin waaweyn oo ku yaalla Caasimadda soomaaliya ee Muqdisho,wadooyinkaas oo qaarkood ku dhowaaday inay xirmaan.
Qaar ka mid ah dadka ku nool xerooyinka Barakacayaasha e ku yaalla degmooyin ka tirsan gobolan Banaadir iyo duleedka Muqdisho,kuwaas oo degan Guryo ka sameysan xooshada ayuu Roobkii xalay saameyn weyn ku yeeshay.
Wararka sidoo kale naga soo gaaraya degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay fiidkii uu ka da’ay Roobka Guga,isla markaana wadooyin waawyen oo ku yaalla degmada Balcad iyo tuulooyinka hoostaga uu roobka jaray oo aan la mari karin.
Sidoo kale roobka waxaa uu xalay ka da’ay deegaano ka tirsan gobolka Ceyn ee Maamulka Khaatuma,waxaana dad ku sugan ay sheegeen in ay dareemeen qabow farabadan maadaama maalmahaan uu jiray kuleyl.
Roobka Guga ayaa markii uu ka da’o qaar ka mid ah Gobolada dalka Soomaaliya,waxaa ka faa’iideysta dad badan oo Beeraley ah,kuwaas oo durba bilaabaya tacbashada Beerahooda si waxyaabah kasoo Go’a ay noloshooda ugu maareeyaan.
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo Maanta kulan yeelanaya